Sarahah Tool ကိုဖော်ပြ | HacksDirect
အောက်တိုဘာလ 19, 2017 Uncategorized
ဒါဟာလအနည်းငယ်ခဲ့, နှင့် "Sarahah" အမည်ရှိဒီလူမှုရေး app ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာသုံးစွဲလူတွေရဲ့အချိန်တစ်ဝက်ကျော်ယူထားပါတယ်. ဤသည်အသစ်က '' ပူခေါင်းစဉ် '' လူတိုင်းအတွက်အကြောင်းပြောနေတာနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာအသုံးပြုနေသည်ဖြစ်လာသည်. ဒါကြောင့်တကယ် Sarahah ဘာလဲ? ဒါဟာသင်ယင်း၏အသုံးပြုသူများအမည်မသိမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ပေးနိုင်ပါတယ်တစ်ခု application ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ဤအကြောင်းကိုကောင်းမွန်သောအရာကိုသင်မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့နိုင်စေဖို့ပေါ်မှာကိုယ့်ကိုကိုယ်မှတ်ပုံတင်ရန်ရန်မလိုပါကြောင်း. သူတို့ကိုသင်လက်ခံရရှိရန်အဘယ်သူမျှမစိတ်ဓါတ်များမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ရုံမှတ်ပုံတင်ရန်ရန်မလိုဘဲသူတို့ကိုပို့ပေးပါ; ဒီဧကန်အမှန်လူတိုင်း၏ပခုံး၏ချွတ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေအများကြီးယူ.
ဒီ app လုပ်ကိုင်ရန်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်. သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်သင့်ရဲ့ Android, iOS မှ Download ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်စတင်ရန်ဖြစ်ပါသည်. သင်အဘို့လည်းထို့နောက်မက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိရန်လိုလျှင်, သငျသညျနာမတျောနှငျ့အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်တူသတင်းအချက်အလက်ထဲမှာပေးခြင်းအားဖြင့်ပလီကေးရှင်းနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်မှတ်ပုံတင်ရန်ရပါလိမ့်မယ်. သငျသညျကိုရယူနိုငျသောက်ဘ်ဆိုက်လည်းဖြစ်ပါတယ်, ကိုယ့်အမှု၌သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမရှိဘူး, သငျသညျလာပြီဖြစ်ကြောင်းအဘယျသို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်. သူတို့အချိန်မရွေးမကြာမီပြုလုပ်၏ချွတ်ရဖို့မထင်နိုင်သောကြောင့်ဒီ app တစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဦးတည်းတူသောနှင့်အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားပုံရသည်.
လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာထုတ်ဖေါ်ရန်မလိုဘဲတစ်စုံတစ်ဦးကမှတစ်ခုခုပြောမယ့်အခွင့်အလမ်းပေးသောအခါ, သူတို့ဘုတ်အဖွဲ့ကူးလေ့မရှိဘူး. ဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရရှိသွားတဲ့သလောက်, အခြားလူတစ်ဦးသောသူအပေါငျးတို့မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ခြင်းသူကိုသိရန်အဘို့အကအနည်းငယ်စပ်စုရရှိသွားတဲ့. သငျသညျဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအချိန်သို့မဟုတ်အခြားလမ်းပတ်ပတ်လည်သင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမြတ်နိုးခဲ့သူကိုရှာဖွေချင်တယ်. သငျသညျနောက်ဆုံးတော့အဲဒီအမည်များကို crack ကိုကူညီနိုင်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုရှိကွောငျးကိုသိရန် get လျှင်သင်မည်သို့ခံစားရမယ်လို့? တော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှား, မှန်သော? ကောင်းပြီဒါဆို, အဘယ်အရာကိုအကြှနျုပျတို့သညျအဘို့အစီအစဉ်ရှိတကယ်ဥစ္စာ၏သိချင်စိတ်ကိုသတ်မယ့်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွဲစေ.
အဆိုပါ Sarahah tool ကိုထုတ်ဖေါ်သင်သူတွေကိုအမည်မသိမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ခြင်းသူတို့အားများ၏အမည်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာထွက်ရှာပေးနိုင်ပါတယ်သောဤ app ကိုစ hack ကတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအသုံးပြုသူရဲ့ IP address ကိုခြေရာခံသောအားဖြင့်တစ်ဦးထောက်လှမ်းမှုစနစ်ရှိပါတယ်, ပြီးတော့အမည်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုတူသောသက်ဆိုင်ရာအသေးစိတ်ကိုတတည်နေရာတင်ပြကြသည်. ဒီ tool မဆိုလမ်းအတွက်တရားမဝင်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်သင်ကအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းစိတ်ပူရန်မလိုပါ. ဒါဟာသင့်အသက်တာကိုအနည်းငယ်လျော့နည်းစပ်စုလုပ်ရုံရှိသေး၏.
ဒီထုတ်ဖေါ် tool ကိုအတူဖြစ်နိုင်ခြေအဆုံးမဲ့များမှာ. သငျသညျယခုသင့်အလုပ်ခွင်မှာကလူကိုသင်စဉ်းစားသောအရာကိုသို့မဟုတ်သင်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုပဌနာကိုလူများကယ့်ကိုသင်၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်မရှိမရှိသိရန်အခွင့်အလမ်းများ. မိုဃ်းကောင်းကင်ကဒီ tool ကိုအတူန့်သတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်; လူကအကြောင်းသိပါနှင့်ပထမနေရာအတွက် Sarahah app ကို အသုံးပြု. ရပ်တန့်ရန်ရသကဲ့သို့ရှည်လျားသည်. ဒါကြောင့်, ထိုသို့ဖြစ်လာသည်အထိ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sarahah ထုတ်ဖေါ် tool ကိုနှင့်သင်၏ဦးခေါင်း၌နေသောသူအပေါင်းတို့မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်သင့်အခွင့်အလမ်းကိုအသုံး.